टर्रो अम्बाको पातको रसले शरीरलाई गर्छ यस्तो अचम्मको फाइदा
This Site Temporary Disabled Contact for more info: 9846617227
गाईको फोटो छोई दर्शन गर्नेलाई यो हरेक वर्ष सन्तुष्टि हुनेछ…
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार १८:०३
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार १०:५९
भारतको सिक्किममा नेपाली भाषालाइ राष्ट्रिय भाषा घोषणाले, छायो खुसियाली !
१७ आश्विन २०७८, आईतवार १५:००
भारतसँग जोडीएका नाका खुले भारतीय गाडीहरु पनि आउन थाले
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार २०:२०
आमाबुवा रातभर व्य’स्त, ओ’छ्यान’बाट ख’सेर १९ म’हिने छो’रीको मृ”त्यु’
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार १२:२१
११ आश्विन २०७८, सोमबार १३:२३
महा’नायकपछि ‘महा’नायिका को ? भन्ने बहस : गौरी कि करिश्मा ?
६ आश्विन २०७८, बुधबार ०९:४८
होमपेज / स्वास्थ्य/जीवनशैली
१९ आश्विन २०७७, सोमबार १७:२३ प्रकाशित
हुन त अ’म्बा हाम्रो घर वरप’र पाइने भए पनि यसको फलमा सबैको ध्यान जान्छ किनकी यो एक मिठो फल हो । तर, हामीले अम्बा खाइरहँदा त्यसको पात कसैले वास्ता गरेको हुँदैनन् । तर, अम्बाको पात खाएमा मानव स्वा’स्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउने अध्ययनले समेत देखाइसकेको छ । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई अम्बाको पात सेवनको फाइदाहरु बारे जानकारी गराउँछौं ।
यी हुन् अ’म्बाको पात सेवन गर्नुका फाइदाहरु – अम्बाको पातबाट बनेको चिया मधुमेहका रो’गीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । – अम्बाको पातको रस निकालेर नियमित सेवन गर्नाले शरीरको तौल कम गर्न सकिन्छ । साथै कपाल र छाला स्वस्थ बनाउन पनि यसको प्रयोग उपयोगी हुन्छ । – ४० ग्राम अम्बाको पात र दुई चम्चा चामलको पिठोमा पानी हालेर उमालेर पिएमा पखाला कम गराउँछ । – अम्बाको पात सेवनले पाचन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गर्छ ।
अम्बाको पात पानीमा उमालेर पिएमा कलेजोलाई निकै फाइदा गर्छ । यसले कलेजो सफा गर्ने काम गर्दछ । अम्बाको पातले छालादेखि कपालसम्मलाई फाइदा पुर्याउँछ । यसले कपालको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । यदि तपाईं कपाललाई लामो बनाउन वा छिटो हुर्काउन चाहनुहन्छ भने पनि अम्बाको पात उपयोगी हुन सक्छ । अम्बाको पात पिसेर शरीरका विभिन्न जोर्नीमा लगाएमा जोर्नी दुख्ने, सुन्निनेलगायतका समस्या समाधान गर्छ यसले दाँत, घाँटीको दुखाइलाई पनि निको पार्दछ । अम्बाको पात सेवन गर्नुहोस् फाइदै फाइदा लिनुहोस्– नेपालमा अम्बा सर्वसुलभ रूपमा पाइने फल हो । नेपालका प्रायः ठाउँमा यसको उत्पादन हुन्छ । तर, मानिसले यसको फल मात्र प्रयोग गर्दछन् । अचम्मको विषय त यो छ कि अम्बाको पात फलभन्दा पनि बढी उपयोगी हुन्छ । अम्बाको पातमा दर्जनौँ रो’ग निको पार्न सक्ने औषधीय गुण हुन्छ ।
आँ’खामुनि का’लो घे’रा किन ब’स्छ ? कतिपयको आँ’खाको तल्लो भागमा कालो धब्बा र घेरा बस्छ । आँखामुनि कालाे हुनुकाे कारण हामी निन्द्रा नपुग्यको बुज्ने गर्छाै तर विभिन्न भिटामिनहरुकाे कमिले गर्दा त्यस्ताे दाग बस्ने गर्छ । आँखामुनि देखिने कालो घेरा अर्थात् डार्क सर्कलका कारण केही महिला आफू नराम्री नभएको महसुस गर्छन् । विभिन्न कारण र खानेकुराको कमीले आँखामुनि कालो घेरा बस्छ ।
कालो धब्बा आफैमा छालाको रंग होइन, बरु रगत र पानीको प्रवाहको कम हो,’छाला विज्ञ जस्टिन हेक्सटल भन्छिन् । दिनमा यस्ता धब्बा अझै स्पष्ट देखिन्छ । सुख्खा हुँदा यस्तो धब्बा झनै देखिन्छ । ‘जब तपाईको शरिर सुख्खा हुन्छ वा शरिरमा पानीको मात्रा न्यून हुन्छ छालाको आधारभूत पत्र अर्थात् डर्मिसमा र’गत र पानीको प्रवाह न्यून हुन्छ । अनि भित्री छाला प्रष्ट रुपमा कालो देखिन्छ’,उनी भन्छिन् । तपाईँले अघिल्लो रात सुख्खा खानेकुरा खानुभएको छ वा पानी कम पिउनुभएको छ भने पनि भोलिपल्ट बिहान आँखाको तल्लो भागमा घेरा पर्नेदेखि कालो धब्बासम्म हुन्छ । अझ साँझ पख कफी खानुभएको छ भने त यसको स्ष्ट असर भोलि बिहान आँखामा देख्नुहुन्छ । किन बस्छ आँखा मुनि कालाे घेरा ?
आइरनको कमी: शरीरमा आइरनको कमी भयो भने आँखामुनि कालो घेरा देखिन्छ। आइरनको कमीका कारण छालाका कोशिकाले पर्याप्त अक्सिजन पाउँदैनन् । एनिमियापीडित र आइरनको अत्यधिक कमी भएका महिलाका आँखा वरिपरिको छाला मृतप्रायः देखिन्छ। आइरनका लागि पालंगो, दाल, गेडागुडीलगायत खानुपर्छ।
भिटामिन ‘सी’को कमी: आँखामुनि कालो घेरा देखिनुको एक कारण भिटामिन ‘सी’को कमी पनि हो। भिटामिन ‘सी’ले छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती, सुन्तलालगायत खान सकिन्छ ।
भिटामिन ‘ए’को कमी: भिटामिन ‘ए’ ले छालामा एन्टी अक्सिडेन्टको काम गर्छ । छाला चाउरिनबाट जोगाउँछ । आँखामुनि देखापर्ने कालो घेराबाट राहत दिन्छ । गाजर, ब्रोकाउली, पेस्ता, आँप आदि भिटामिन ‘ए’ का स्रोत हुन्।
भिटामिन ‘के’को कमी: छालाका सुरक्षाका लागि भिटामिन ‘के’ को कमी हुन दिनु हुँदैन । यस भिटामिनको काम आँखामुनि कालो घेरा पर्न नदिनु हो । शरीरमा भिटामिन ‘के’ कम भयो भने आँखा वरिपरिको छाला निस्तेज देखिन्छ । यो भिटामिनका लागि खानामा हरियो सागपात, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, माछालगायत खानेकुरा खानुपर्छ ।
भिटामिन ‘ई’को कमी: आँखामा पर्ने डार्क सर्कलका लागि भिटामिन ‘ई’ को कमी पनि जिम्मेवार छ। यस भिटामिनको कमीले छाला निष्प्राण देखिन्छ। छालालाई स्वस्थ र चम्किलो राख्न बदाम, एभोकाडो, किवी, जैतुन तेल, ट्राउट माछा खानुपर्छ । याे जानकारी पनि अत्यन्तै जरूरी हुन्छ ।
यति कुरा याद गरेर दिनरात मोबाइल कम्युटर चलाए पनि आँखालाई केहि हुदैन, जानी राख्नुस् ! आजभोली आँखा कमजोर नभएको मानिसहरु हुदैनन् । बच्चाको आँखामा समेत चस्मा लगाएकै हुन्छन् । कम्प्युटरमा लगातार बसी रहदा आँखा कमजोर हुने समस्या हुन्छ । निरन्तर मोवाइलमा हेरी रहदा पनि आँखा कमजोर हुन्छ । आँखाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा देख्न नसक्नेलाई थाहा हुन्छ । तै पनि आँखा मानव जिवनको लागि निकै महत्वपुर्ण र नभई नहुने अंग हो । आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । आँखा कमजोर हुने कारण खानेकुराले गर्दा पनि हो । त्यसकारण घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस ।
पालुंगोको जुस: हरियो पात भएको साग र तरकारी आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । हरियो तरकारीको सुप पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । दिनदिनै एक गिलास पालुंगोको जुस पिउँदा भरपूर मात्रामा भिटामिन ए प्राप्त हुन्छ । गाजरको जुस: आँखाले धमिलो देख्न थाल्यो भने दिनदिनै गाजरको जुस पिउनुस् । एक गिलास गाजरको जुसमा एउटा गोलभेंडाको रस मिसाएर पिउँदा धेरै लाभ प्राप्त हुन्छ । बिहानबिहानै यो मिक्स जुस पिउन थाल्नुस् । हरियो सागपात: आँखाका लागि क्यारोटिन लाभदायक हुन्छ र हरियो सागपातमा यो तत्त्व भरपूर भेटिन्छ । यसले आँखाको पुतलीमा सकारात्मक असर पार्छ । यसलाई आफ्नो आहारमा अवश्य समावेश गर्नुस् । ओखर: ओखरमा ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिड भरपूर हुन्छ । आँखाको ज्योति बढाउन बच्चाहरूलाई नियमित रूपमा ओखर खुवाउनुस् ।
भिटामिन: शरीरमा भिटामिनको कमी हुँदा आँखा कमजोर हुन्छ । आफ्नो आहारमा भिटामिन ए, बी, सी र ई भएका आहार समावेश गर्नुस् । सुन्तला, मौसम, केरा, लौका, किवी, भेडेखुर्सानी, हरियो सागसब्जी र भुइँकटहर जस्ता खानेकुरा खानुस् । मुङ्फली बदाम, जुस र दूधबाछ बनेका आहारले पनि फाइदा गर्छन् । बदाम: बदाम आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । राती पानीमा बदाम भिजाएर बिहान खानुस् । यसले आँखा पनि बलियो बनाउँछ अनि स्मरणशक्ति पनि बढाउँछ । बदाममा सूप र मिश्री मिसाएर खाँदा पनि लाभ हुन्छ । तर आयुर्वेदका यस्ता केहि घरेलु उपचार छन्, जसको प्रयोगले आखाको तेज बढ्दै जान्छ ।
१. ग्रीन टि: दैनिक नियमित रुपमा २ ३ कप ग्रीन टि पिउनाले यसमा रहेको एन्टीअक्सिडेन्ट्सले आँखालाई स्वस्थ राख्दछ ।
२. अमला: सुकाएको अमलालाई रातभर पानीमा भिजाउनुस् । भोलीपल्ट विहान यसको पानीले आँखा सफा गर्नुस् । यसो गर्नाले आँखा स्वस्थ रहन्छ ।
३. घिउ: घिउले आँखी भौ तथा कन्चडतिर ५ १० मिनेट मसाज गर्नाले आँखाको तेज बढ्दै जान्छ ।
४. जीरा: जीरा र मिश्रीलाई बराबर मात्रामा मिसाएर पिस्नुस् । यसको धुलोलाई नियमित रुपमा घिउसंग मिसाएर खानाले आँखाको ज्योति बढाउछ ।
६. बिहान उठेर सफा पानी आँखामा छ्याप्ने: आँखालाई चिसो पानीले धुनुस् । त्यसपछि चिसो पानी तथा गुलाब जलले कटनको कपडा भिजाएर १० मिनेटसम्म आखाँमा पट्टि बनाएर लगाउनाले आँखा स्वस्थ रहन्छ ।
७. त्रिफला: अथवा त्रिफला चुर्ण रातभर पानीमा भिजाउनुस् । भिजाएको पानीले विहान आँखा सफा गर्नाले आखामा हुने इन्फेक्सन तथा मां’सपेशीलाई स्वस्थ राख्दछ ।
८. सर्स्युं: सुत्ने बेलामा आखीभौ तथा निधारमा तोरि तथा सर्स्युंको तेलले मालिस गरेर सुत्नाले आँखाका मांसपेशीलाई बलीयो बनाउदछ ।
९. तोरीको तेल: राति सुत्नुअघि तोरीको तेलले टाउको दिनहँु मालिस गर्दा पनि आँखाको ज्योति ठीक हुन्छ ।
१०. अमला: अमला पकाएर तयार पारेको गुलियो अचार दिनमा दुई पटक खानाले आँखाको ज्योति बढ्छ ।
११. सुप: एक चम्चा सुप, दुईवटा हाडेबदाम र आधा चम्चा मिस्रीलाई राम्रोसँग पिसेर राति सुत्नुअघि एक ग्लास दूधसँग पिउने गर्नुपर्छ ।
१२. सुकुमेल: तीनचारवटा सुकुमेल र एक चम्चा सुपलाई राम्रोसँग पिस्ने र एक ग्लास दूधसँग दिनहुँ पिउने ।
१३. हाडेबादाम: रातफ छ सातवटा हाडेबदाम पानीमा भिजाउने र बिहान खाने गर्नाले आँखाको पावर ठीक हुँदै जान्छ ।
आँखामा के गर्ने ? के नगर्ने ?
१. आँखा क्रमश कमजोर हुँदै गएको महसुस भइरहेको छ भने कपालमा रङ, हेयर डाई र रसायनयुक्त स्याम्पू प्रयोग नगर्ने ।
२. एक चम्चा त्रिफला राति माटोको भाँडोमा भिजाउने र बिहान कपडाछान गरी आँखा धुने ।
३. बिहान सूर्योदयअघि उठेर घाँसमा खाली खुट्टा १५–२० मिनेट हिँड्ने । यसो गर्दा आँखाको ज्योति क्रमश बढ्दै जान्छ ।
४. तोरीको तेलले पैतला नियमित मालिस गर्ने । नुहाउनुभन्दा १० मिनेटअघि खुट्टाका औँलामा तोरीको तेल दल्नाले पनि लाभ मिल्छ । ७. नियमित रूपमा अंगुर खानाले राति आँखा कम देख्ने समस्या हट्दै जान्छ । ८. १० ग्राम सुकुमेल र २० ग्राम सुपका दाना राम्रोसँग पिस्ने । यसरी पिसेको चूर्ण एक चम्चा दूधसँग नियमित खाने ।
९. सुकेको अमला राम्रोसँग पखालेर राति पानीमा भिजाउने । भोलिपल्ट दिनमा तीनपटक अमला भिजाएको पानी कपासको मद्दतले आँखामा हाल्ने । र, भिजाएको अमला खाने । नियमित यसो गर्नाले तीन महिनामै ठूलो अन्तर महसुस हुन्छ ।
१०. बन्दाकोभीको पत्तामा सिधेनुन र कालो मरिच छरेर खानासँगै नियमित खाने ।
११. आँखा कमजोर छ भने सुत्नमा कञ्जुस्याइँ नगर्ने । कम सुत्नाले आँखा अझ कमजोर हुँदै जान्छ ।
१२. राती ओछ्यानमा पल्टिएर नपढ्ने ।
१३. आँखा कमजोर छ भने हरेक दिन भोजनमा प्याज र लसुनलाई समेट्ने गर्नुपर्छ । लसुन र प्याजमा सल्फर पाइन्छ, जुन आँखा तेजिलो बनाउन उपयोगी हुन्छ ।
१४. भटमास अथवा भटमासबाट बनेका परिकार खाने गर्ने । यसमा पाइने फ्याट, फ्याटी एसिड, भिटामिन–ईलगायत तत्व आँखाका लागि लाभदायक हुन्छन् ।
१५. पल्टिएर लामो समयसम्म लगातार टीभी नहेर्ने ।
१९ आश्विन २०७७, सोमबार १७:२३ मा प्रकाशित